ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဗိုက်ပေါက်ရဲ.အနာကို ဘယ်သူဆေးကုပေးမှာလဲ ( ဇော်သက်ထွေး )
ဗိုက်ပေါက်ရဲ.အနာကို ဘယ်သူဆေးကုပေးမှာလဲ ( ဇော်သက်ထွေး )
ဗိုက်ပေါက်လို. နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀န်းကခေါ်ကြတဲ့ ( ထွန်းလင်းကျော် ) နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာ ၂၄ နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။
အခုတော့ သူ.ကိုမြင်တွေ.ရသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်လျလျ စကားပြောရင် လေဆက်ပြတ်မသွားအောင်
အားတင်းပြောရတယ်။ စကားတစ်ခါပြောပြီးရင် နားရတယ်။ ဒါမှသာ ဆက်ပြောလို.ရတယ်။
ဗိုက်ပေါက်ကစကားပြောရင်း အကျီချွတ်လိုက်တယ်။ သူ.ခန္ဓာကိုယ် ညာဘက်ချိုင်းအောက်နားမှာ ပလာစတာကပ်ထားတဲ့
နေရာတစ်ခုကိုတွေ.ရတယ်။ သူက အားလုံးကိုခွင့်တောင်းပြီး ဆေးအိတ်ကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။
ပလာစတာကပ်ထားတဲ့ နေရာကို ဆွဲခွာလိုက်တော့ ၂ လက်မ ပတ်လည် အပေါက်ကြီးတစ်ခုကို တွေ.ရတယ်။
ကျွန်တော့်ကျောထဲမှာ စိမ့်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ဗိုက်ပေါက်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။
ဆေးထည့်တဲ့ညှပ်ယူပြီး အပေါက်ထဲကနေ ပတ်တီးလိပ်တွေကို တစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်နေတယ်။ သူ.ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ပတ်တီးလိပ်
(၅) လိပ်ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ယူဇောစိမ်ထားတဲ့ ပတ်တီးလိပ် အသစ် (၅) လိပ်ကို အဲဒီအပေါက်ထဲကနေ တစ်ခုချင်း
သူ.အနာအ၀က ၂ လက်မကျော်၊ အနာရဲ.အတွင်းပိုင်းအကျယ်က ၄ လက်မလောက်ရှိပြီး ဖောက်တံအဆုံးဆိုရင် ၆ လက်မလောက်
ရှည်တယ်။ သူ.ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကို သန်.ရှင်းရေးလုပ်ဖို. သူကိုယ်တိုင်ပဲ နိစ္စဒူဝလုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုက်ပေါက်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ. အနီးကပ်လုံခြုံရေးတစ်ယောက်၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိခဲ့တဲ့ ပါတီဝင်တစ်ယောက် " နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး "
ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်က မြို.တော်ခန်းမရှေ.မှာ တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့သူတစ်ယောက်။
သူဘာဖြစ်လို. ဒီရောဂါရခဲ့သလဲ။ သူ.ကျမှ ကံကြမ္မာက ဘာလို.မျက်နှာသာမပေးခဲ့တာလဲ။
ဗိုက်ပေါက်က ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (မ.က.သ)မှာ
စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဗဟန်းမြို.နယ် NLD လူငယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာ
ပြည်သူတွေမဲပေးပုံ ပေးနည်းများကို လိုက်လံပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ်က ဦးကြည်မောင်ရဲ.
မဲဆွယ်ဟောပြောပွဲတစ်ချို.ကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရပြီး ၁၉၉၈ မှာ ဒဂုံမြို.နယ်လူငယ်တာဝန်ခံ (၃) အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ၉ လပိုင်းကစတင်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် ၁၀လ ပိုင်းအထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ခြံဝန်းအတွင်း
လုံခြုံရေးတာဝန် နဲ. အခြားတာဝန်များကို (၆) နှစ်တာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ (၆) နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ.အတူ
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် (၃) ကြိမ်ချမှတ်ခံရပြီး အခြားလူငယ်များနဲ. တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက ခြံအမှတ် (၅၄) မှာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေက နေအိမ်ခြံဝန်းအတွင်းမှ NLD လူငယ်များအား ဆက်လက်ထားခွင့်မပြုတော့တဲ့အတွက်
ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ အပြင်ပြန်ရောက်ပြီး ၂လအကြာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးကို
တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကြီးကြီးမားမား ဘာရောဂါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။
သူယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကို ဘ၀ရော၊ အသက်ရောပုံအပ်ပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူအဖမ်းခံရပြီး အောင်သပြေစစ်ကြောရေးစခန်းရောက်တော့ ညှဉ်းပန်းနိုပ်စက်ခံရလို. နည်းနည်းတော့အထိနာသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်ကြောရေးမှာသိပ်မနေလိုက်ရဘူး။ သူ.ကို အမှုစွဲတင်ပြီး အင်းစိန်ထောင်ပို.လိုက်တယ်။
အင်းစိန်ထောင်ရောက်တော့ ၅ ဆောင်တိုက်မှာနေရတယ်။ ၃လလောက် အချုပ်ဘ၀နဲ.နေပြီးမှ ပုဒ်မ ၅(ည) နဲ.အထူးတရားရုံးကိုထုတ်ပါတယ်။
၂၅-၂-၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ထောင်ဒဏ် (ရ) နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ကျပြီး ၆ လလောက်အကြာမှာ ဗိုက်ပေါက်ရောဂါစဖြစ်တော့တာပါပဲ။ အဆုတ်ကို အအေးပတ်သွားပြီးတဲ့နောက် အစာစားရင်အန်တယ်။
နောက်တော့ သွေးပါလာတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါအန်ရင် သွေးက ရေသန်.ဗူး ၂ ဗူးစာလောက်အန်တယ်။ ဒီမှာ လူလည်းပိန်ကျသွားတယ်။
ဖြူဖျော့ပြီး ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်။ ထောင်က စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ထောင်ဆေးရုံတင်ပေးပါတယ်။ါးပေမယ့် ဘာဆေးမှမရှိဘူး။
ဆေးရုံကဆင်းတော့ ၂ တိုက် (အတို) ရောက်သွားတယ်။ ဗိုက်ပေါက်အခြေအနေက ပိုဆိုးဝါးသွားတယ်။ သွေးတွေဆက်တိုက် အန်တယ်။
ထောင်ဆေးရုံပို.တယ်။ ကုပေမယ့် ရောဂါက မသက်သာဘူး။ အဆုတ်နာက တော်တော်ကြီးနေပြီ။ အဲဒီနောက် အခြေအနေမဟန်တော့တာနဲ.
အပြင် အင်းစိန်ဆေးရုံကို ပို.လိုက်တယ်။ အင်းစိန်ဆေးရုံက အကျဉ်းသားတွေကိုထားတဲ့ Gward Ward က မြေအောက်ထပ်မှာ မှောင်မှောင်မဲမဲ
စိုစိုစွတ်စွတ်၊ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်း။ မီးချောင်းမှိန်မှိန်လေးအောက်မှာ သစ်သားကုတင်လေးတွေ ချခင်းပေးထားတယ်။
အကျဉ်းသားတွေအတွက် ဘာမှပေးမထားဘူး။ ကိုယ့်အိပ်ယာနဲ.ကိုယ် အိပ်ကြ။ ဒါပဲ။ အခန်းအပြင်ဖက်မှာ ရဲအစောင့်တွေချထားတယ်။
ကိုယ်လိုသူလိုဘ၀တူ ဆေးရုံတက်လာတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကြည့်လိုက်တော့ ပိန်ခြောက်ကြုံလှီနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ. ပြူးကြောင်ပြီး
ကယ်သူမဲ့ ကူသူမဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ. နာဇီအကျဉ်းထောင်ထဲက အကျဉ်းသားတွေလိုပါပဲ။
ဗိုက်ပေါက်ကို ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်း သွေးတိတ်ဆေးထိုးပြီး drip တွေ ဘာတွေချိတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်ကို သံကြိုးခတ်လိုက်ပြီး
ကုတင်တိုင်နဲ.ချည် သော့ခတ်ထားတယ်။ သူ.ခမျာ သွေးအန်နေပါတယ်ဆိုမှ လှည့်လို.မရ၊ ပြုလို.မရ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားက ထွက်မပြေးတတ်ဘူး
ဆိုတာ သူတို.မသိကြဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ ဗိုက်ပေါက်က ကံဆိုးချင်တော့ VOA က သေသွားပြီလို. အသံလွှင့်ကြေညာသွားတယ်။
ဒီသတင်းလဲလွှင့်ပြီးရော ဗိုက်ပေါက်ကို ချက်ချင်းဆေးရုံကနေ ထောင်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်ကြတယ်။ ထောင်ဆေးရုံပေါ်ကို ထောင်မှူးနဲ. SB (ထောက်လှမ်းရေး)
တွေရောက်လာပြီး မေးခွန်းတွေ မေးတော့တာပါပဲ။ လူနာတစ်ယောက်က ဧည့်တွေ.လဲ မရှိဘဲနဲ. ဘယ်လိုလုပ်ပြီး VOA နဲ.ဆက်သွယ်နိုင်မှာလဲ။
သူတို. မကျေမနပ်နဲ. ပြန်သွားတယ်။
ဒါပေမယ့်နောက်တစ်နေ. အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ်က ဆေးရုံကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါ သေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်ပေါက်ကိုတွေ.သွားတယ်။
ချက်ချင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို Refer လုပ်ခိုင်းတယ်။ ဧည့်တွေ.မပေးဖို.တော့ တားမြစ်လိုက်တယ်။ ဆေးရုံကြီးရောက်မှ ဗိုက်ပေါက်ရဲ.ရောဂါက
ဆေးသေသေချာချာ ကုသပေးခြင်း ခံရတော့တယ်။ CD Scan ရိုက်တယ်။ ရင်ခေါင်းခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်အေးက
ကိုယ်တိုင်ကုသပေးတယ်။ အဆုပ်ထဲက သွေးကြောကို စက်နဲ.ပိတ်ပေးဖို.အတွက် ပေါင်ကနေပိုက်ထည့်ပြီးလုပ်ကြတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ သွေးကြောကခေါက်နေလို. မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးဆရာကြီးက ခွဲစိတ်ကုသဖို. သဘောတူရင် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။
သေမှာ နဲ. ရှင်မှာ နှစ်လမ်းဘဲရှိတဲ့အတွက် ဗိုက်ပေါက်က လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ဆေးရုံကြီးက ၂ ပတ်ကြာရင် ခွဲဖို.ရက်ချိန်းပေးလိုက်ပြီး
ထောင်ပြန်ရောက်ပြီး ၁ ပတ်အကြာမှာပဲ ဗိုက်ပေါက်ကို Medical Release နဲ. ထောင်ကနေလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
ဗိုက်ပေါက် (ခေါ် ) ထွန်းလင်းကျော်၊ ကိုသက်နိုင်စိုး၊ ဖုန်းအောင်၊ ဒေါ်ရီရီဝင်း၊ ဒလကိုသိန်းနိုင်တို.နဲ. အတူတူ လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီလိုနဲ.အပြင် ပြန်ရောက်တော့ အဆုတ်နာကိုမခွဲဖြစ်ပြန်ဘူး။ သွေးတိတ်ဆေးလေးထိုးရင်း ဆေးမြီးတိုတွေနဲ.ကုရင်း နိုင်ငံရေးကိုဆက်လုပ်တယ်။
ဒီလိုနဲ. ၂၀၀၈ ဧပြီလရောက်တော့ အကြီးအကျယ် သွေးအန်တယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပို.လိုက်ရတယ်။ ဆေးရုံကြီးရောက်တော့ အောက်စီဂျင်ပေးနေရပြီ။
တစ်လလောက်ကြာမှ ခွဲစိတ်ရတယ်။ သူ.အဆုတ်တခြမ်းကမကောင်းတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လှီးထုတ်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အနာမကျက်သေးခင် သံငံရည်ထုတ်ဖို. ဗိုက်မှာပိုက်တပ်ထားရတယ်။ ပိုက်ဖြုတ်တဲ့နေ.က ဆရာဝန်က မလာဘူး။
ပိတ်ရက်ဖြစ်နေလို.ဆိုပြီး တာဝန်ကျသူနာပြုဆရာမကိုဖုန်းနဲ.လှမ်းပြောပြီး ဖြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဆရာမက ဗိုက်ထဲက သံငံရည်မကုန်သေးခင်မှာ
ပိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ ၂ ရက်ကြာတော့ ထွန်းလင်းကျော် အသည်းအသန်ဖျားပါလေရော။ ဗိုက်ကဖောင်းလာတယ်။
ကျောဘက်ချုပ်ရိုးကနေ သံငံရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတယ်။ အထဲမှာ သံငံရည်မကုန်ဘဲ ပိုက်ဖြုတ်လိုက်တော့ အထဲမှာလှိုက်ပြီး စားသွားတယ်။
ချောင်းဆိုးရင်လည်း သံငံရည်တွေပါနေပြီး နောက်ဆုံး ဒုတိယအကြိမ်ခွဲစိတ်ဖို. ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ခွဲစိတ်တဲ့အခါ နံရိုးတစ်ချောင်းကို ၃ လက်မလောက်ဖြတ်ပြီး အပေါက်လုပ်လိုက်ရတယ်။ နေ.တိုင်းအဲဒီအပေါက်ကနေ ယူဇောစိမ်ထားတဲ့
ပတ်တီးတွေနဲ. ဆေးထည့်ရတယ်။ အဲဒီအပေါက်နေရာက အဆုတ်ဘဲရှိတာ။ အသားရှိတာမဟုတ်တော့ အသားပြန်တက်ဖို.ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်ဘူး။
အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ ငွေကြေးထောက်ပံမှု၊ အကောင်းဆုံးဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းပညာ၊ ပစ္စည်းကရိယာတွေရှိမှ ထွန်းလင်းကျော်ရဲ.
ဗိုက်ပေါက်ကို ပြန်ပိတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ခုတော့ ၁ နှစ်ခွဲအရွယ် သားလေးနဲ. ဇနီးနဲ.သူ.ဘ၀ကို ချီတက်နေဆဲပါ။
( တကယ်တော့ ဗိုက်ပေါက် (ခေါ်) ထွန်းလင်းကျော်ရဲ. ကြေကွဲဖွယ်ဘ၀ဟာ အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးကိုဘဲ လက်ညှိးထိုးရမလား )
( တာဝန်မဲ့ တာဝန်ကျေလုပ်တတ်လွန်းတဲ့ လက်ညှိးထောင် ခေါင်းငြိမ့် ဆေးဝန်ထမ်းတွေကိုပဲ တရားဆိုစွဲရမလား )
( ခေတ်ပြောင်းစံနစ်ပြောင်းချိန် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပနေလို. ထွန်းလင်းကျော်ကိုလှည့်မကြည့်အားတဲ့
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကိုပဲ အပြစ်ဆိုရမလား )
အဖြေမရှိတဲ့ စာတပုဒ်ကိုငေးကြည့်နေရင်း ထွန်းလင်းကျော် (ခေါ်) ဗိုက်ပေါက်ကို ဘယ်သူဆေးကုပေးမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ ထပ်ပြန်တလဲလဲ
by Kyaw Swar Myint on Saturday, November 17, 2012 at 3:36am ·